GIF - ဝီကီပီးဒီးယား
ဂရပ်ဖစ်ဖလှယ်မှုပုံစံ (GIF / dʒɪf / JIF or / ɡɪf / GHIF)သည် လမ်းပြမြေပုံပုံရိပ်ပုံစံဖြစ်ပြီး ၁၉၈၇ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင်အမေရိကန်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာရှင်စတိဗ်ဝီဟိုက်ဦး ဆောင်သောအွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုပေးသူCompuServeတွင်အဖွဲ့မှတီထွင်ခဲ့သည်။ လျှောက်လွှာများနှင့်လည်ပတ်မှုစနစ်များအကြားကျယ်ပြန့်သောအထောက်အပံ့နှင့်သယ်ဆောင်နိုင်မှုကြောင့်အင်တာနက်မှလမ်းခွဲတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုလာခဲ့သည်။
ကမ္ဘာလုံးလည်နေပုံကို ပြသသည့် GIFပုံ
၁၅ ဇွန် ၁၉၈၇; ၃၄ နှစ် အကြာက (၁၉၈၇-၀၆-15)
(၁၉၈၉; ၃၃ နှစ် အကြာက (၁၉၈၉))
lossless [:en:[Raster graphics
ပုံစံတစ်ခုသည်ပစ်ဇယ်တစ်ခုစီအတွက် 8 bits အထိထောက်ပံ့သည်။ တစ်ခုတည်းသောဓာတ်ပုံသည် 24-bit RGB အရောင်နေရာမှရွေးချယ်ထားသောကွဲပြားသောအရောင် ၂၅၆ ခုအထိပန်းချီကားတစ်ခုအားရည်ညွှန်းသည်။ ကာတွန်းတွေကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးပြီးဘောင်တစ်ခုစီအတွက် ၂၅၆ ခုအထိသီးခြားပန်းချီကားကိုခွင့်ပြုပါတယ်။ ဤပန်းချီကား ကန့်သတ်ချက်GIFများသည်အရောင်ဓာတ်ပုံများနှင့်အခြားပုံရိပ်များကိုအရောင်ပြောင်းသောအရောင်ချယ်ခြင်းဖြင့်ပြန်လည်ထုတ်ယူရန်သင့်လျော်မှုမရှိစေသော်လည်းဂရပ်ဖစ်သို့မဟုတ်အရောင်များသောအရောင်များရှိသောအမှတ်တံဆိပ်များကဲ့သို့ပိုမိုလွယ်ကူသည့်ပုံရိပ်များအတွက်သင့်တော်သည်။ ဗွီဒီယိုနှင့်မတူဘဲGIFဖိုင်အမျိုးအစားသည်အသံကိုမထောက်ပံ့ပါ။
ပုံရိပ်အရည်အသွေးကိုမယုတ်လျော့စေဘဲဖိုင်အရွယ်အစားကိုလျှော့ချရန် Lempel-Ziv-Welch (LZW) lossless data compression techniqueကိုအသုံးပြု၍GIFပုံရိပ်များကိုချုံ့ချဲ့လုပ်နိင်သည်။ ဒီcompression techniqueကို၁၉၈၅ မှာမူပိုင်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ၁၉၉၄ တွင်ဆော့ဖ်ဝဲမူပိုင်ခွင့်ရှိသူUnisysနှင့် CompuServeတို့အကြားလိုင်စင်သဘောတူညီချက်နှင့် ပတ်သက်၍အငြင်းပွားမှုများသည်အိတ်ဆောင်ကွန်ယက်ဂရပ်ဖစ်(PNG) စံနှုန်းကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေခဲ့သည်။ ၂၀၀၄ တွင်သက်ဆိုင်ရာမူပိုင်ခွင့်အားလုံးသက်တမ်းကုန်သွားပြီ။
၂.၁ GIF ရဲ့အသံထွက်
၆ ဥပမာ GIF ဖိုင်
CompuServeသည်GIFကို ၁၉၈၇ဇွန် ၁၅ ရက်တွင်စတင်ပြီးအနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်သာဖြစ်သောဖိုင်များဒေါင်းလုပ်သည့်နေရာများအတွက်အရောင်ပုံသဏ္ဌာန်ပုံစံကိုပေးခဲ့သည်။ GXသည် LZWဒေတာချုံ့ကိုအသုံးပြုသောကြောင့်လူကြိုက်များခဲ့သည်။ PCX နှင့် MacPaintအသုံးပြုသည့်ပုံစံများဖြစ်သော run-length encodingများထက်ပိုမိုထိရောက်သောကြောင့်ကြီးမားသောပုံရိပ်များကိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောအချိန်တိုအတွင်းတွင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်သောကြောင့်အလွန်နှေးကွေးသောmodemများပင်ဖြစ်သည်။
မူရင်းGIFပုံစံကို ၈၇အေဟုခေါ်သည်၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် CompuServeသည် ၈၉အေဟုခေါ်သောတိုးချဲ့ထားသောဗားရှင်းကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ၎င်းတွင်ကာတွန်းနှောင့်နှေးမှုများ၈၇ ကတွင်စီးဆင်းနေသောပုံရိပ်များစွာကိုထောက်ပံ့ထားပြီး၊ နောက်ခံအရောင်များနှင့်လျှောက်လွှာ metadataများ၏သိုလှောင်မှုကိုထောက်ပံ့သည်။ 89a သတ်မှတ်ချက်သည်စာသားတံဆိပ်များအားစာသားအဖြစ်ထည့်သွင်းရန်ထောက်ခံသည်ဂရပ်ဖစ်အချက်အလက်များတွင်မထည့်သွင်းပါ၊ သို့သော်ဖော်ပြသောဖောင့်များကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှုနည်းပါးသောကြောင့်ဤအင်္ဂါရပ်ကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးမပြုပါ။ ဗားရှင်းနှစ်ခုအားဖိုင်၏ပထမ6bytesမှော်နံပါတ် သို့မဟုတ်လက်မှတ်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ခွဲခြားနိုင်သည်။ ASCII အဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုလျှင်GIF87aနှင့် GIF89aကိုအသီးသီးဖတ်ပါ။
CompuServeသည်ကွန်ပြူတာများစွာအတွက်ဒေါင်းလုပ်နိုင်သောကူးပြောင်းခြင်းအသုံးအဆောင်များကိုထောက်ပံ့ပေးခြင်းဖြင့် GIFကိုမွေးစားရန်အားပေးခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့် ၁၉၈၇ ဒီဇင်ဘာလတွင် Apple IIGS အသုံးပြုသူသည် Atari STသို့ Commodore 64 တွင်ဖန်တီးထားသောဓာတ်ပုံများကိုကြည့်ရှုနိုင်သည်။
၁၉၉၅ ခုနှစ်စက်တင်ဘာလတွင် Netscape Navigator 2.0 သည်ကာတွန်းGIFများကိုကွင်းဆက်ချိတ်ဆက်နိုင်ခဲ့သည်။
ရုပ်ပုံများစွာကိုဖိုင်တစ်ခုထဲတွင်သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်မှုဒေတာများပါဝင်သည်။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဒေါင်းလုပ်ထားသောပုံရိပ်ကိုပင်မှတ်မိလွယ်သောပုံစံဖြင့်ပုံရိပ်စကရင်လိုင်းများကိုစနစ်တကျသိုလှောင်ထားသောoptional interlacing feature သည်လည်း GIF၏လူကြိုက်များမှုကိုကူညီသည်။ အသုံးပြုသူသည်အကယ်၍ လိုအပ်သည်မဟုတ်လျှင်downloadကိုဖျက်သိမ်းနိုင်သည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ်မေလတွင်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သည်GIFကိုအထောက်အပံ့ပေးခဲ့သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတွင်အင်စတာဂရမ်သည် GIF စတစ်ကာများကိုပုံပြင်မုဒ်ထဲထည့်ခဲ့သည်။
နာမ်အဖြစ် GIF ဟူသောဝေါဟာရကိုအဘိဓာန်များစွာ၏အသစ်ထုတ်ဝေမှုများတွင်တွေ့ရသည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း၏အမေရိကန်တောင်ပံသည် GIF ကိုကြိယာအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ GIF ဖိုင်ကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ GIFing သည်နွေရာသီအိုလံပစ်ပွဲတော်မှမြင်ကွင်းများကိုမျှဝေရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ပုံနှိပ်ပညာရှင်များကGIFများသုတေသနနှင့်သတင်းစာပညာအပါအဝင်အလေးအနက်ထားသောအသုံးချဆော့ဝဲလ်တစ်ခုဖြစ်လာသည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
ပုံစံကိုဖန်တီးသူများသည်“ အား” ဟူသောစကားလုံးကို“ အားကစား” တွင်ပျော့ပျောင်းသော G, dʒɪf / ဟုအသံထွက်ခဲ့သည်။ Steve Wilhite ကပြောကြားရာတွင်ရည်ရွယ်ထားသောအသံထွက်သည်အမေရိကန်မြေပဲထောပတ်အမှတ်တံဆိပ် Jif ကိုတမင်တကာပဲ့တင်ထပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ယခုလက်ရှိစကားလုံးသည် "လက်ဆောင်" ရှိသကဲ့သို့ခက်ခဲသော "G" / ɡɪf / နှင့်လည်းကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသံထွက်လာသည်။ ဥရောပသည်ပျော့ပျောင်းသော "G" နှင့်အက္ခရာတစ်ခုစီကိုတစ်ဦးချင်းစီအားသီးခြားဖော်ပြခြင်းဖြစ်သော်လည်းအာရှနှင့်ထွန်းသစ်စနိုင်ငံများတွင်လူကြိုက်များသည်။
GIFများကိုအွန်လိုင်းမှာစာတိုပေးပို့တဲ့အခါ၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ခံစားချက်တွေကိုထုတ်လွှင့်ဖို့သုံးတယ်၊ စကားလုံးတွေကိုသုံးတာထက်သုံးနိုင်တယ်
သဘောတရားအရ GIF ဖိုင်သည်ပုံသေအရွယ်အစားရှိသောပုံများzeroရိယာ"ယုတ္တိမျက်နှာပြင်"ကိုသုည (သို့)ထိုထက်ပိုသော "ပုံများ" ဖြင့်ဖော်ပြသည်။ များစွာသောGIFဖိုင်များသည်ယုတ္တိမျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးကိုပြည့်စေသည့်ပုံတစ်ခုတည်းရှိသည်။ အခြားသူများကယုတ္တိမြင်ကွင်းကိုသီးခြားခွဲရုပ်ပုံများအဖြစ်ခွဲထားသည်။ ပုံများသည်သက်ဝင်ကာတွန်း GIF ဖိုင်တွင်သက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုဘောင်များအဖြစ်လည်းအလုပ်လုပ်နိုင်သည်၊ သို့သော်ယုတ္တိမျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးကိုပြန်ဖြည့်စရာမလိုပေ။
GIF ဖိုင်များကိုဗားရှင်းအားပေးသော fixed-length header "GIF87a" သို့မဟုတ် "GIF89a"ဖြင့်စတင်သည်။ ပုံ၏ယုတ္တိမျက်နှာပြင်ဖော်ပြချက်pixel အတိုင်းအတာနှင့် ယုတ္တိမျက်နှာပြင်၏အခြားလက္ခဏာများကိုဖော်ပြသည်။ screen descriptor သည် Global Color Table ၏တည်ရှိမှုနှင့်အရွယ်အစားကိုလည်းသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်လာပါကနောက်တွင်ရှိနေလိမ့်မည်။
ထိုနောက်တွင်ဖိုင်ကို segmentsများအဖြစ်ခွဲခြားသည်တစ်ခုချင်းစီကို 1-byte sentinel ဖြင့်မိတ်ဆက်သည်။
ပုံ(0x2C, ASCII ကော်မာဖြင့်မိတ်ဆက်သည် ',')
Extension block 0x21 မှစတင်မိတ်ဆက်ASCII အာမေဍိတ်အမှတ် '!')
နောက်တွဲယာဉ် 0x3B တန်ဖိုးတစ်ခုဘိုက်တစ်ခုASCII semicolon ';') ဖိုင်၏နောက်ဆုံး byte ဖြစ်သင့်သည်။
ပုံတစ်ခုသည်ပုံသေအလျားပုံရိပ်ဖော်ပြချက်ဖြင့်စတင်သည်။ အရောင်တည်နေရာနှင့်အရွယ်အစားကိုသတ်မှတ်နိုင်သည် နောက်တွင်ရှိနေလျှင်နောက်ဆက်တွဲအဆိုပါပုံရိပ်ဒေတာအောက်ပါအတိုင်းတဦးတည်းက byte ကုဒ်နံပါတ်များ၏အကျယ် bit ကိုပေးသော byte bi- အရောင်ပုံရိပ်တွေများအတွက်အနည်းဆုံး 2-bits ဖြစ်ရမည်ထို့နောက် LZW-encoded ဒေတာများပါဝင်သော sub-blockများစာရင်းနှင့်အတူလိုက်ပါ။
GIFဥပမာပုံကို web-safe palette တစ်ခုဖြင့်သိမ်းဆည်းပြီး Floyd-Steinberg နည်းဖြင့်အသုံးပြုသည်ပုံတွင်အရောင်များနည်းပါးသောကြောင့်ပြဿနာများရှိသည်။
ဖိုင်အတွင်းရှိရုပ်ပုံတစ်ခု (frame) တွင်အသုံးပြုသောအရောင်များသည် palette ဇယားတွင်သတ်မှတ်ထားသော RGB တန်ဖိုးများရှိပြီး entries ၂၅၆ ခုအထိပါဝင်နိုင်သည်။ ပုံရိပ်အတွက်အချက်အလက်များသည်၎င်းတို့၏အညွှန်းများအားဖြင့်အရောင်များကိုရည်ညွှန်းသည် ( 0-255) palette။လူတွေအနည်းငယ်ဟာတစ်ပြိုင်နက်တည်းအရောင်များကိုပိုမိုပြသရန်ဟာ့ဒ်ဝဲကိုတတ်နိုင်သောကြောင့်ဒီကန့်သတ်ချက်ဟာကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပုံရပါတယ်။ ရိုးရှင်းသောဂရပ်ဖစ်၊ မျဉ်းကြောင်းဆွဲခြင်း၊ ကာတွန်းနှင့်မီးခိုးရောင်ဓာတ်ပုံများသည်အများအားဖြင့်အရောင် ၂၅၆ ခုအောက်သာလိုအပ်သည်။
ပုံမှန်ကန့်သတ်ချက် ၂၅၆ ခုထက်ပိုပြီးပြသရန်နည်းလမ်းကိုသရုပ်ဖော်ထားသောကာတွန်းရုပ်ပုံ GIF တစ်ခု
စစ်မှန်သောအရောင်ပုံရိပ်များအတွက် GIF ကိုလုံးဝအသုံးမပြုသော်လည်း၎င်းကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။GIF တွင်ရုပ်ပုံများစွာပါဝင်နိုင်သည်။ တစ်ခုချင်းစီတွင်ကိုယ်ပိုင် ၂၅၆ အရောင်များပါဝင်သည်။ ပြီးပြည့်စုံသောရုပ်ပုံကိုဖန်တီးရန်အတုံးများကိုကွက်ကွက်ကွင်းချနိုင်သည်။ တနည်းအားဖြင့် GIF89a ၏အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်သည် "ပွင့်လင်းမြင်သာသော" အရောင်တစ်ခု၏စိတ်ကူးကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ထိုနေရာတွင်ရုပ်ပုံပိတ်ပင်တားဆီးမှုတစ်ခုစီတွင်ကိုယ်ပိုင် ပန်းချီကား ၂၅၅ ခုမြင်နိုင်သည့်အရောင်များနှင့်ပွင့်လင်းမြင်သာသောအရောင်တစ်မျိုးတို့ပါဝင်သည်။ ရုပ်ပုံအပြည့်အစုံကိုအပေါ်ယံအလွှာတစ်ခုစီ၏မြင်နိုင်သောအပိုင်းတစ်ခုဖြင့်ရုပ်ပုံပိတ်ဆို့ခြင်းများကိုဖန်တီးခြင်းဖြင့်ဖန်တီးနိုင်သည်။
ဥပမာ GIF ဖိုင်ပြင်ဆင်
↑ Graphics Interchange Format, Version 87a။ W3C (15 June 1987)။ ၁၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၂ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ဂရပ်ဖစ်ဖလှယ်မှုပုံစံဗားရှင်း 89a။ W3C (ဇူလိုင်လ 31, 1990)။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်မတ်လ ၆ ရက် တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The New Oxford American Dictionary (3rd ed.)။ 2012။ (part of the Macintosh built-in dictionaries).
↑ ၄.၀ ၄.၁ "Gif's inventor says ignore dictionaries and say 'Jif'"၊ BBC News၊ 2013-05-22။ 2013-05-22 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ O'Leary၊ Amy။ "An Honor for the Creator of the GIF"၊ 21 May 2013။ 22 May 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ GIF။ Oxford Dictionaries Online။ Oxford University Press။7October 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Perez၊ Sarah (2015-05-29)။ Facebook Confirms It Will Officially Support GIFs။ techcrunch.com။ 2015-05-29 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The New Oxford American Dictionary (2nd ed.)။ Oxford University Press။ 2005။ p. 711။
↑ Gif - Definition from the Merriam-Webster Dictionary။ Merriam-Webster Dictionary။ Merriam-Webster, Incorporated။6June 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၀.၀ ၁၀.၁ Oxford Dictionaries USA Word of the Year 2012။ Oxford American Dictionaries (2012-11-13)။ 2013-05-01 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ GIF။ The Cambridge Dictionary of American English။ Cambridge University Press။ 2014-02-19 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Holdener III၊ Anthony (2008)။ Ajax: The Definitive Guide: Interactive Applications for the Web။ O'Reilly Media။ ISBN 978-0596528386။
↑ "Online Art"၊ Compute!'s Apple Applications၊ December 1987၊ pp. 10။ 14 September 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ GIF။ The American Heritage Abbreviations Dictionary, Third Edition။ Houghton Mifflin Company (2005)။ 2007-04-15 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Furht၊ Borko (2008)။ Encyclopedia of Multimedia။ Springer။ ISBN 978-0387747248။
↑ McHugh, Molly (2015-05-29). "You Can Finally, Actually, Really, Truly Post GIFs on Facebook". Wired. wired.com. Retrieved on 2015-05-29.
↑ Introducing GIF Stickers (in en-US) (2018-01-23)။ 12 December 2019 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။7October 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Valinsky၊ Jordan (2020-02-25)။ Jif settles the great debate withaGIF peanut butter jar။ 2020-02-25 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ O'Leary၊ Amy။ "Battle Over 'GIF' Pronunciation Erupts"၊ The New York Times၊ 23 May 2013။
↑ Olsen၊ Steve။ The GIF Pronunciation Page။6March 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Rothberg၊ Daniel။ "'Jeopardy' wades into 'GIF' pronunciation battle"၊ Los Angeles Times၊4December 2013။ 2013-12-04 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "How do you pronounce "GIF"?"၊ The Economist။4January 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ S. Chin; D. Iverson; O. Campesato; P. Trani (2011)။ Pro Android Flash (PDF)။ New York: Apress။ p. 350။ ISBN 9781430232315။ 11 March 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Marur၊ D.R.; Bhaskar၊ V. (March 2012)။ "Comparison of platform independent electronic document distribution techniques"။ Devices, Circuits and Systems (ICDCS)။ International Conference on Devices, Circuits and Systems (ICDCS)။ Karunya University; Coimbatore, India: IEEE။ pp. 297–301။ doi:10.1109/ICDCSyst.2012.6188724။ ISBN 9781457715457။2July 2017 တွင် မူရင်း |archive-url= က |url= ကို လိုအပ်သည် (အကူအညီ) အား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ |access-date= က |url= ကို လိုအပ်သည် (အကူအညီ)
↑ Nullsleep - Jeremiah Johnson - Animated GIF Minimum Frame Delay Browser Compatibility Study။ 26 May 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ They're different! How to match the animation rate of gif files accross [sic] browsers (14 February 2012)။5April 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 15 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Andreas Kleinert (2007)။ GIF 24 Bit (truecolor) extensions။ 16 March 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 23 March 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Philip Howard။ True-Color GIF Example။3September 2000 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 23 March 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
spec-gif89a.txt အပေါ် GIF ကို 89a သတ်မှတ်ချက် w3.org
GIF 89a သတ်မှတ်ချက်ကို HTML သို့ပြန်လည်ပြင်ဆင်သည်
LZW နှင့် GIF ကရှင်းပြသည်
Animated GIFs - Off Book (ဝက်ဘ်စီးရီး) မှ ၆ မိနစ်စာမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်။
GifCities (GeoCities Animated GIF Search Engine)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=GIF&oldid=727596" မှ ရယူရန်
၂၆ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၇:၅၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၆ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၇:၅၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။